2022 အတွက် အကောင်းဆုံး CBD ဆီ (ကြိုးစားပြီး စမ်းသပ်ထားသည်) - shopgiejo.com
CBD ရေနံကို ဆေးခြောက်မှ CBD ထုတ်ယူပြီးနောက် ၎င်းကို ဆီဖြင့် (ဥပမာ- လျှော်စေ့ သို့မဟုတ် အုန်းသီး) ဖြင့် အရည်ဖျော်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်သည်။
1700 ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင်၊ အမေရိကန်ဆေးပညာဂျာနယ်များသည် မတူညီသောကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုကုသရန် ဆေးခြောက်ကို မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါအစီအစဥ်ကို စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်ပြီး ဆေးဝါးအဖြစ် လက်ခံသည်အထိ ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာခဲ့သည်။
ဆေးခြောက်ဆီသည် တက်ခြင်းနှင့် အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် အစွမ်းထက်သောကုသမှုအဖြစ် အင်္ဂလန်တွင် ပထမဆုံးစျေးကွက်တင်ခဲ့သည်။ မကြာမီ၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် အခြားအရာများအပါအဝင် အခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် ကုသရန်ဖြစ်လာသည်။
သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများပင်ဖြစ်နိုင်ခြေကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ CBD ရေနံ ဆက်လက်၍ ထုတ်ကုန်သည် ကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးလောကတွင် ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း CBD ရေနံ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို သုတေသနပြုလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သို့သော်လည်း လေ့လာမှုများစွာနှင့် သရုပ်ပြအထောက်အထားများက အမှန်တကယ်အကျိုးများစွာကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြသည်။
CBD ဆီသည် နာကျင်မှုကို သက်သာစေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အစာစားချင်စိတ်၊ နာကျင်မှု၊ အိပ်စက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်တုံ့ပြန်မှုကဲ့သို့သော အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိန်းညှိပေးသည့် endocannabinoid စနစ်တစ်ခုပါရှိသည်။ Endocannabinoids၊ ခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်လုပ်သော အာရုံကြောဓာတ်စာများသည် အာရုံကြောစနစ်ရှိ cannabinoid receptors များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ MS နာကျင်မှု၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နာတာရှည်နာကျင်ခြင်းနှင့် ကျောရိုးဒဏ်ရာများကြောင့်ဖြစ်ရသည့် လက္ခဏာများကို သက်သာရာရစေသည်။ ထို့အပြင်၊ ဆေးခြောက်သည် ဓာတုကုထုံးများ ကုသပြီးနောက် သောက်သည့်အခါတွင်လည်း အကျိုးရှိနိုင်ကြောင်း လေ့လာမှုများက ဖော်ပြသည်။
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။
သုတေသီအချို့၏အဆိုအရ CBD သည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာစေနိုင်သည်။ CBD သည် စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည့် ဓာတုပစ္စည်း serotonin ကို ဦးနှောက် receptors များက တုံ့ပြန်ပုံပြောင်းသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ 600 မီလီဂရမ် CBD ဆီအနည်းငယ်ပမာဏသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသောသူများကိုကူညီနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ CBD သည် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချပေးသည်၊ အိပ်စက်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးပြီး PTSD ကို တိုးတက်စေသည်။
Anti-Acne Treatment ၊
အုန်းဆီ၊ အာဂန် သို့မဟုတ် သံလွင်ဆီကဲ့သို့ သယ်ဆောင်သည့်ဆီနှင့် CBD ဆီ ရောစပ်ခြင်းသည် ဝက်ခြံပေါက်တတ်သော အသားအရေကို ထိရောက်စွာ ကုသပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းသည် sebum ထုတ်ပေးသည့်ဆဲလ်များပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်သောကြောင့်အဆီထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းညှိပေးပြီးရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချသည်။ သို့သော် CBD ဆီအသုံးမပြုမီ အရေပြားဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်သည်ဟု မှတ်သားထားပါ။
2022 အတွက် အကောင်းဆုံး CBD ဆီများ
အကောင်းဆုံးများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် CBD ရေနံထုတ်ကုန် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ စမ်းသုံးကြည့်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်များမှ အရည်အသွေးမြင့် CBD ဆီကိုသာ ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားပါသည်။ CBD ရေနံထုတ်ကုန်များ၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကဏ္ဍများကို ရှာဖွေဖတ်ရှုပြီး အသိဥာဏ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။
2017 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, JustCBD CBD လုပ်ငန်းတွင် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး လေးစားဖွယ်နာမည်တစ်ခုအဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ လျင်မြန်စွာ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် 100% US စိုက်ပျိုးထားသော စက်မှုလျှော်ပင်မှ ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးပြီး CO2 ထုတ်ယူမှုဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ JustCBD သည် ၎င်း၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ဂုဏ်ယူကာ ဝဘ်ဆိုက်ရှိ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းအစီရင်ခံစာများကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ထုတ်ကုန်အားလုံးကို အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖြင့် စောင့်ကြည့်နေကြောင်း စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
CBD ရေနံ Tincture အုန်းသီး
အရသာ - အုန်းသီး
စျေးနှုန်း - $29.99 မှ
လွတ်လပ်သော ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ - ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ရနိုင်သည်။
သက်သတ်လွတ် - မဟုတ်ဘူး
JustCBD အုန်း CBD ဆီ
အုန်းသီးအရသာကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ဒီ tincture ကို သဘောကျမှာ သေချာပါတယ်။ ၎င်းကို မျိုချသည့်အခါတွင် အရသာကောင်းမွန်ပြီး အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာများနှင့်လည်း ကောင်းစွာရောစပ်ပါသည်။ ထို့ အပြင်၊ CBD ဖျော်ရည် အစာမကြေခြင်းကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်သော MCTs ပါ၀င်သော အုန်းသီး၏ ကျေးဇူးကြောင့် လျင်မြန်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်သည် ။ ရလဒ်အနေနဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သူ့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ Coconut CBD ဆီသည် သင့်အား ပြေလျော့စေသည်၊ စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး သင့်ကို အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်စေသည်။
"မိမိကိုယ်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကို ဝါသနာပါသောသူများ" အတွက် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဇာတိ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုပို့ဆောင်ပေးသည်။ ကုမ္ပဏီကို 2017 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းက သုံးစွဲသူများသည် မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်မှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကို အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စေမည့် ထုတ်ကုန်များကို ပေးအပ်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်များကို ၎င်း၏မိခင်ကုမ္ပဏီ Root Bioscience, Inc. မှ ထုတ်လုပ်သည်။ အဖွဲ့သည် ယှဉ်ပြိုင်မှုထက် ထူးခြားသော အရည်အသွေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို အားသာချက်ပေးသည့် မျိုးစေ့မှ စင်အထိ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်သည်။
CBD + CBG ကိုရွှေ့ပါ။
အရသာ - ဂျင်း နှင့် ပျားရည်
စျေးနှုန်း - $ 65
CBD + CBG ကိုရွှေ့ပါ။ 40 mL တွင် 40 mg CBD နှင့် 1mg CBG တို့ဖြင့် ဖော်စပ်ထားသော full-spectrum oil ဖြစ်သည်။ ဆီသည် နာကျင်မှုမရှိဘဲ ဆက်လက်လှုပ်ရှားရန် ကူညီပေးသည့် အစွမ်းထက်သော ဖော်မြူလာပါရှိသည်။ ဂျင်းနှင့် ပျားရည်၏ နူးညံ့သောအရိပ်အမြွက်ဖြင့် သဘာဝအတိုင်း အရသာရှိသည်။ အရသာရှိစေတဲ့အပြင် ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေက ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေပြီး ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေပါတယ်။ ထုပ်ပိုးမှုတွင် ရိုးရှင်းသောဆေးညွှန်းလမ်းညွှန်တစ်ခုပါ၀င်ပြီး pipette သည် ဆေးပမာဏကို တသမတ်တည်းထားရန် လွယ်ကူစေသည်။ ၎င်းကို ဘာသာစကားအလိုက် သုံးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းကို ၎င်းတို့၏ စိတ်ကြိုက်ဖျော်ရည်များတွင် ရောစပ်နိုင်သည်။
စိမ်းလန်းသောမြစ် ရုက္ခဗေဒပညာ လူသိများသော အော်ဂဲနစ် CBD ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ဤမိသားစုပိုင်ခြံသည် Asheville, NC အခြေစိုက် အော်ဂဲနစ် USDA တံဆိပ်ကို လက်ခံရရှိသည့် မြောက်ကာရိုလိုင်းနားရှိ ပထမဆုံး လျှော်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Green River Botanical ၏အဆိုအရ၊ ဤကုမ္ပဏီ "ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်ခံ့သော၊ ကျင့်ဝတ်အရရင်းမြစ်ဖြစ်သော ရောင်စဉ်အပြည့်ရှိသော လျှော်ပင်ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရပ်ရွာကိုပြန်လည်ပေးအပ်ရန်အတွက် ဒေသတွင်းအကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အနီးကပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း။" ထို့အပြင် Green Botanicals ၏ အဆီများကို အော်ဂဲနစ် ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြု၍ ပြုပြင်ထားသည်။ အခြေခံသည် MCT ဆီနှင့် လျှော်ဆီထုတ်ယူသည်။ ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီသည် ဤ tincture ကိုဖော်စပ်ရန် CO2 ထုတ်ယူသည့်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။
အပြည့်အဝ Spectrum သဘာဝ CBD ရေနံ Tincture
အရသာ - သဘာဝ
ခွန်အား - 50mg/ml
စျေးနှုန်း — $20/4ml ဒရမ်မာဖြင့် စတင်သည်။
စိမ်းလန်းသောမြစ် ရုက္ခဗေဒပညာ သဘာဝ 15% CBD ရေနံ
ကုမ္ပဏီ၏ အမှတ်တံဆိပ် ထုတ်ကုန်သည် ရောင်စဉ် အပြည့်ဖြစ်သည်။ သဘာဝ 15% CBD ရေနံ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော လျှော်ပင်မှ ထုတ်လုပ်သည်။ အရသာမပါသော သို့မဟုတ် ငရုတ်ကောင်းမှုန့် သို့မဟုတ် သံပုရာအရသာဖြင့် ဗားရှင်းများစွာဖြင့် ထွက်ပေါ်လာသည်။ သံပုရာသီးသည် လန်းဆန်းသောအရသာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ကိုယ်ရေအကြိုက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်သူအားလုံးသည် အကျိုးကျေးဇူးများခံစားရရန် တစ်ရက်လျှင် သုံးကြိမ်အထိ အနည်းငယ်သောစက်များ လိုအပ်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ $4 ကုန်ကျသော 20 ml ဒရမ်ဖြင့် စတင်ရန် အရွယ်အစားများစွာဖြင့် ရောက်ရှိလာပါသည်။ ထို့အပြင် 10 ml နှင့် 30 ml ပုလင်းများတွင် စျေးနှုန်း $50 နှင့် $110 အသီးသီးရှိသည်။
ပျော်ရွှင်မှုကို ကုစားပါ။ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးကို Colorado ၏ လျှော်ခြံများတွင် ဒေသအလိုက်စိုက်ပျိုးထားသော ပိုးသတ်ဆေးကင်းစင်သော လျှော်ပင်မဟုတ်သော GMO မဟုတ်သော လျှော်ပင်များကို အသုံးပြုကြောင်း သေချာစေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များကို ISO-6000 GMP လက်မှတ်ရဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ရွေးချယ်ထားပြီး သန့်ရှင်းပြီး ပရီမီယံအရည်အသွေး ထုတ်ကုန်များပေးအပ်ရန် ၎င်းတို့၏ကတိကဝတ်များအကြောင်း အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြပါသည်။
Injoy သန့်စင်သော CBD ရေနံကို ကုသပါ။
ခွန်အား - 1500 mg / 3000 mg / 6000 mg
စျေးနှုန်း - $79.99 မှ
ပျော်ရွှင်မှုကို ကုစားပါ။ C စင်BD ဆီ
သန့်စင်သော CBD ဆီ CBD isolate နှင့် အုန်းဆီတို့မှ ထုတ်လုပ်သည်။ သုံးသပ်သူအားလုံးကောက်ချက်ချသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် သဘာဝ၊ မြေကြီးအရသာရှိပြီး အလွန်သာယာသည်။ ဆီသည် မတူညီသော CBD ပြင်းအား 1,500 mg, 3,000 mg, နှင့် 6,000 mg တို့ဖြစ်သည်။ စံစားသုံးမှုနည်းလမ်းများအပြင်၊ ဆီသည် လိမ်းဆေးသုံးရန် ကောင်းမွန်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ စစ်ဆေးမှုကာလအတွင်း ဝေဖန်သုံးသပ်သူများ တွေ့ကြုံရသည့် အဖြစ်အများဆုံး အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို သက်သာစေပါသည်။ Pure CBD ဆီ၏စျေးနှုန်းသည် သင်ရွေးချယ်သော အားသာချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 1,500 mg ဆီသည် $79.99 ၊ 3,000 mg သည် $99.99 နှင့် 6,000 mg oil သည် $139.99 ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် CBD အာရုံစူးစိုက်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်စျေးနှုန်းများသည်အတော်လေးတတ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောတူနိုင်သည်။
"ဒြပ်စင် Apothec တီထွင်ဆန်းသစ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မောင်းနှင်ထားသော စားသုံးသူအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သိပ္ပံပညာ၏ ထက်မြက်မှုနှင့်အတူ သဘာဝ၏ကုစားနိုင်သောစွမ်းအားကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် CBD-ပေါင်းစပ်ကျန်းမာရေးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည်။. အော်တို-ခုခံအားချို့ယွင်းမှု ရှစ်မျိုးဖြင့် ကြုံတွေ့နေရသော ပူးတွဲတည်ထောင်သူသည် နာကျင်မှုကို သက်သာစေရန်၊ အသားအရေကို အာဟာရဖြည့်ပေးကာ သက်သာရာရစေမည့် စိတ်ကြိုက်ကိုယ်ခန္ဓာစောင့်ရှောက်မှု ပေါင်းစပ်မှုကို ဖန်တီးသောအခါ အမှတ်တံဆိပ်၏ ခရီးစတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် လက်မှုပညာဖော်မြူလာများတွင် အသန့်စင်ဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်ပြီး အမြင့်ဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
စိတ်အေးအေးထားပြီး စုဆောင်းထားသော ဆေးရည်
စျေးနှုန်း - $ 119.99
vegan နှင့် non-toxic ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ဖော်စပ်ထားသည်။ စိတ်အေးအေးထားပြီး စုဆောင်းထားသော ဖျော်ရည် 1,500 mg broad-spectrum CBD၊ 150 mg CBD နှင့် လိမ္မော်ခွံဆီ၊ ရဟန်းသစ်သီးထုတ်ယူမှုနှင့် vanilla fruit extract အပါအဝင် အစွမ်းထက်သော ရုက္ခဗေဒပစ္စည်းများ ရောစပ်ထားသည်။ ထူးခြားသော ဖော်မြူလာသည် သင့်အား အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အပန်းဖြေရန်နှင့် သင့်စိတ်ခံစားချက်ကို မြှင့်တင်ရန် ကူညီပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။
အဆိုပါ Nu-X CBD tinctures များသည် ထိပ်တန်းအရည်အသွေး၊ USA မှရင်းမြစ်၊ hemp မှရရှိသော CBD ၏ ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏စွယ်စုံရထုတ်ကုန်အမျိုးအစားသည် vegan၊ အပြည့်အဝအော်ဂဲနစ်ဖြစ်ပြီး GMO မဟုတ်သော MCT အခြေခံဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်များနှင့် တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများကြောင့် ချီးကျူးခံရလေ့ရှိသည်။
Nu-X Citrus CBD ရေနံ - ဖလော်ရာ
အရသာ - Citrus
ခွန်အား - 100mg/300mg/700mg/1,000mg
စျေးနှုန်း - $7.99 မှ
Nu-X Flora Tincture
Citrus အရသာ၊ Nu-X Flora ဖျော်ရည် မွှေးပြီး ပေါ့ပါးပြီး အနံ့အရသာရှိပါတယ်။ ၎င်း၏အရသာသည် ကြည်နူးစရာ၊ လန်းဆန်းပြီး နေ့စဥ်အသုံးပြုရန် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းသည် လိမ္မော်အရသာကို လွှမ်းမိုးထားသဖြင့် သကြားလုံးနှင့်တူသည်။ ထို့အပြင် သံပုရာသီး၏ တီးတိုးသံသည် သိမ်မွေ့စွာ ခံစားရသည်။ ဤ CBD ဆီ၏စျေးနှုန်းသည်၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိအပေါ် မူတည်. ဥပမာအားဖြင့်၊ 100 mg က $7.99၊ 300 mg က $24.99၊ 700 mg က $32.99 ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းတွေက အမြင့်ဆုံးမှာရှိပေမယ့် ကုန်ပစ္စည်းတွေက ပေးရတဲ့စျေးနဲ့ တန်ပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါတွင်၊ ရောင်းချသူသည် လျှော့စျေး သို့မဟုတ် ကမ်းလှမ်းချက်များကို ပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤဆောင်းပါးကိုရေးသောအခါတွင်၊ အသက်ဝင်သော "ဝယ်3ခု အခမဲ့" ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုရှိသည်။
ထူးခြားသောပျော်ဝင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ရရှိသောမြင့်မားသော cannabinoid အာနိသင်နှင့် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာထုတ်ယူမှုများ၏ပေါင်းစပ်မှုမှရရှိသောအခြေအနေအလိုက်ရရှိသောရလဒ်များသည်အမှန်တကယ်သတ်မှတ်ထားသည်၊ ဆေးခြောက်CBD ၏အဆီများခြားနားသည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ထူးခြားသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို မျှဝေပါသည်။ သူတို့ကပြောတယ်"ကုန်ကြမ်းပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ပြေစာနှင့် ပြင်ပကုမ္ပဏီမှ စမ်းသပ်မှုဖြင့် ဖီးနစ်၊ အရီဇိုးနားတွင် စတင်သည်။ ထို့နောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ GMP နှင့်ကိုက်ညီသော စက်ရုံများတွင် ဖော်မြူလာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်းတို့ကို ကုမ္ပဏီ၏ ပြည့်စုံမှုစင်တာတွင် ပြီးမြောက်စေပါသည်။"။
အပြည့်အဝ Spectrum CBD ဆီ - ငရုတ်ကောင်းကို ချိန်ညှိပါ။
အရသာ - ငရုတ်ကောင်း
ခွန်အား – 500mg/1,000mg/1,500mg
စျေးနှုန်း - $35.97 မှ
သီးခြားဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ — ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ရနိုင်သည်။
Vegan - ဟုတ်တယ်။
ဆေးခြောက် CBD အဆီများ
Cannafyl ပါရာစီတမော CO2 ထုတ်ယူသည့် ပရီမီယံအရည်အသွေးရှိသော လျှော်ပင်ကို အသုံးပြု၍ စီမံထားပါသည်။ peppermint မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီဖြင့်အရသာရှိသောဆီသည်အရသာရှိပြီးလန်းဆန်းစေသည်။ နှစ်ပတ်ကြာ စမ်းသပ်ပြီးနောက်တွင် ကွဲပြားမှုကို ခံစားနိုင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ Balance ကိုအသုံးပြုခြင်းမှ အထင်ရှားဆုံးရလဒ်မှာ စိတ်ခံစားချက်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး တည်ငြိမ်သောခံစားမှုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်သူတစ်ဦးမှအစီရင်ခံတင်ပြသည်မှာသူမ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုအဆီအသုံးပြုသောအခါပိုမိုထိန်းချုပ်ထားသည်။
PureKana Kentucky တွင် စိုက်ပျိုးပြီး ရိတ်သိမ်းထားသော အော်ဂဲနစ်လျှော်ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု ကင်းစင်ခြင်းကြောင့် လူသိများသော ကုမ္ပဏီသည် အရည်အသွေးမြင့် တတ်နိုင်သော ကျန်းမာရေး ထုတ်ကုန်များကို ကတိပြုပါသည်။ ထို့အပြင်၊ PureKana သည် ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များနှင့် "Berry အရသာ သို့မဟုတ် Melatonin ကဲ့သို့ အိပ်စက်ခြင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသော သဘာဝနှင့် အရသာရှိသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် CBD ကို ကုမ္ပဏီက မည်သို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုမည်နည်း။ နောက်ဆုံးရလဒ်မှာ gummies၊ tinctures နှင့် sleep-aids ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာများစွာ၏ အကောင်းဆုံးသော ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။"။
Mint CBD ဆီ
အရသာ - Mint
ခွန်အား - 300mg/600mg/1,000mg
စျေးနှုန်း - $54 မှ
Independent ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ - ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ရနိုင်သည်။
သက်သတ်လွတ် – ဟုတ်တယ်။
PureKana Mint CBD ဆီ
Mint CBD အော်ဂဲနစ်၊ GMO မဟုတ်သော ရောင်စဉ်အပြည့် CBD ဆီဖြစ်သည်။ Mint အရသာ၊ ဆီသည် အရသာရှိပြီး လန်းဆန်းစေသည်။ ပိုပြီး လန်းဆန်းတဲ့ အရသာကို ခံယူရင် ပြီးပြည့်စုံတယ်။ ထို့အပြင်၊ ပေါင်းထည့်ထားသောအရသာသည် လုံးဝသဘာဝကျကြောင်း သိလိုက်ရသည့်အတွက် ကျေနပ်မိပါသည်။ Pure Kana သည် M. Piperita အပင်မှ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကို အသုံးပြုသည်။ အဆီသည် 300mg၊ 600mg နှင့် 1000mg တို့ဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီး ၎င်းသည် နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုကို စီမံခန့်ခွဲရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အပန်းဖြေအနားယူမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက် သင့်အား ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်သည် THC ကင်းစင်သောဆီ လိုချင်ပါက ၎င်းတွင် ခြေရာခံပမာဏ (0.3%) အောက် ပါဝင်သောကြောင့် ၎င်းသည် သင့်အတွက် စံပြရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပေ။
Elite CBD လန်ဒန်အခြေစိုက် အသစ်တည်ထားသော CBD အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သော ၎င်းတို့၏ 10 နှစ်အတွေ့အကြုံကို အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး CBD ထုတ်ကုန်များအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်များသည် 100% အော်ဂဲနစ်၊ GMO မဟုတ်သော၊ နှင့် THC အခမဲ့ဖြစ်သည်။
သန့်စင်သော CBD ဆီ - 3,000 မီလီဂရမ်
ခွန်အား - 3,000 မီလီဂရမ်
စျေးနှုန်း – £104.99
Elite CBD 3,000mg CBD ဆီ
အဆိုပါ 3,000mg CBD ရေနံဖျော်ရည် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော အစွမ်းအထက်ဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ မနက်ခင်းကော်ဖီ ဒါမှမဟုတ် တခြားဖျော်ရည်တွေမှာ ရောစပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သဘာဝအရသာရှိပါတယ်။ CBD ဆီသည် အလွန်ထိရောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်း၊ 100mg သည် စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် အိပ်စက်ခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အံ့ဩစရာများကို လုပ်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိလာရသည်။
Cannacares သည် ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးတွင် အမျိုးမျိုးသော ပေးပို့မှုနည်းလမ်းများရှိပြီး ထူးခြားသောထုတ်ကုန်များကို စျေးကွက်သို့ ယူဆောင်လာရန် အစဉ်အမြဲ ရည်မှန်းထားသည်။ CBD ဖျော်ရည်များကို UK တွင်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ၎င်းတို့၏ Novel Food Dossier တင်သွင်းသူ ကျော်ကြားသော ပေးသွင်းသူတစ်ဦးထံမှ ဝယ်ယူထားသော CBD Isolate ကို အသုံးပြု၍ ဖော်စပ်ထားသည်။ ဖျော်ရည်အားလုံးသည် 30 ml ပုလင်းတွင်ပါရှိပြီး 3,000 mg CBD ပါရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ "၎င်းသည် CBD အများအပြားဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရသူများအတွက် 10% CBD ဆီ လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။” ထို့အပြင် Cannacanares ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် vegan ဖြစ်သည်။
CBD Tincture Oil ကိုနှိုးပါ။
အရသာ - အခွံပွလိမ္မော်သီး
ခွန်အား - 3,000mg/30ml
စျေးနှုန်း — £35.00 ($48 ခန့်)
Independent စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ - ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ရနိုင်သည်။
Cannacares Wake CBD ရေနံ
Wake CBD ဆီသည် Coenzyme Q10 နှင့် CBD ပေါင်းစပ်ထားသောထူးခြားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအစွမ်းထက်သောပေါင်းစပ်မှုသည် အရေပြားကာကွယ်မှု၊ ကင်ဆာကာကွယ်မှုနှင့် ဆီးချိုရောဂါကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းအပါအဝင် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ရရှိစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် tincture ၏အရသာသည်ကြည်နူးဖွယ်ဖြစ်သည်။ လိမ္မော်သီးဖြင့် အရသာရှိသောကြောင့် တစ်နေ့တာကို စတင်ရန် ကူညီပေးသည့် Citrusy နှင့် လန်းဆန်းသော ခံစားမှုတို့ကို ပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ CBD ရေနံသည် ကြာရှည်ခံသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည် — သုံးသပ်သူအားလုံးနီးပါးသည် ရလဒ်များကို ခြောက်နာရီအထိကြာအောင် အစီရင်ခံကြသည်။
Altwell CBD ရေနံ
Cannacares Wake tincture
Cannafyl Balance CBD ရေနံ
Elite CBD ရေနံ
Green River Botanicals သဘာဝ CBD ရေနံ
Nu-x Flora CBD ရေနံ
ဇန်နဝါရီလ 9, 2022
OKI သုံးသပ်ချက် 2022 ကို ခံစားကြည့်ပါ။